SERVICES | Interception CPR
ဤသင်တန်းသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များ၊ သူနာပြုနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသာမကကျွမ်းကျင်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ CPR အသိအမှတ်ပြုလိုသူများအတွက်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
အပြည့်အဝနည်းပြဆရာ ဦး ဆောင်သောသင်တန်း: $ 80
Blended AHA အွန်လိုင်းအဘို့ကို $ 31 Check-off $ 50
Heartsaver CPR AED - ဤသည်သည်ဗီဒီယို အခြေခံ၍ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေး CPR နှင့် AED အသုံးပြုမှု၊ မွေးကင်းစကလေး CPR နှင့်လူကြီးများ၊ ကလေးများနှင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်များအားအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောသင်ခန်းစာများကိုသင်ကြားပေးသည်။
ရောနှောနေသော AHA အွန်လိုင်းအပိုင်းကို ၁၅ ဒေါ်လာစစ်ဆေးခြင်း - ဒေါ်လာ ၄၅
အပြည့်အဝနည်းပြဆရာ ဦး ဆောင်သောသင်တန်း: $ 60
Heartsaver First Aid CPR AED - ဤသင်ခန်းစာသည်ကလေးငယ်များ၊ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်နို့စို့ကလေးများ၊ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ရှေး ဦး သူနာပြု၊ CPR နှင့်အလိုအလျောက်ပြင်ပ defibrillator (AED) ကိုကလေးများ၊
Blend AHA အွန်လိုင်းအပိုင်းကိုလေ့လာခြင်း $ 19.50 Check-off $ 60
အပြည့်အဝနည်းပြဆရာ ဦး ဆောင်သောသင်တန်း: $ 90
နှလုံးခုန်ကလေးအထူးကုဆရာဝန် CPR AED:
ဤသင်တန်းသည်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများ၊ မွေးစားမိသားစုများ၊ မွေးစားခြင်း၊ စခန်းတိုင်ပင်သူများနှင့်နည်းပြများအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Blend AHA အွန်လိုင်းသင်ကြားမှု $ 20 Check-off $ 60
အဆင့်မြင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဘဝအထောက်အပံ့ (ACLS) -ဤသင်တန်းသည်အဆင့်မြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
နည်းပြဆရာ ဦး ဆောင်သောသင်တန်းချိန်ကို ၈ နာရီဆက်တိုက်နှစ်ရက်စီစဉ်ထားသည်။
AHA Heartcode ACLS ကိုအွန်လိုင်းပြီးပါကလက်ကမ်းစာစောင်ကို ၂ နာရီခန့်စီစဉ်ထားပါမည်။
Blend AHA သည်ဒေါ်လာ ၁၄၄ ဖြင့်သင်ကြားသည်
Check-off $ 145
အပြည့်အဝနည်းပြဆရာ ဦး ဆောင်သောသင်တန်း: $ 290
** BLS သည် ၆ လအတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် ACLS အားလုံးနှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Pediatric Advanced Life Support (PALS): This course is designed for the advanced pediatric healthcare provider.
The course is only offered throug Interception CPR asaskill check-off. Provider must purchase and complete the online blended learning through AHA prior to skills.
Blended AHA online portion $151
Check-off with Intercepiton CPR $145
တစ်နာရီလျှင် ၀.၅ ဆင့်နှုန်းဖြင့်ခရီးသွားခကို ပြင်ပသင်တန်းများအတွက်ထပ်မံထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည် ဝိန်း Fort ဝိန်းစီးတီးကန့်သတ်၏။
Fort Wayne မြို့တွင်စီစဉ်ထားသောမည်သည့်သင်တန်းကိုမဆိုခရီးသွားခ မရှိပါ။
သင်၏စီးပွားရေး၊ ကျောင်း၊ သို့မဟုတ်အိမ်၌ကွင်းဆင်းလေ့ကျင့်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်သည်။
ကြားဖြတ် CPR သည် Ft Wayne တွင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းအုပ်စုများအတွက်နေရာချပေးနိုင်သည်။
ရောနှောထားသောသင်တန်းတစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည့် AHA ကဒ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောအွန်လိုင်းလက်မှတ်အတွက်ပေးဆောင်နိုင်သည့် American Heart Association ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့သင့်ကိုပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းသင်တန်းပြီးဆုံးသည်နှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအချိန်ဇယားအတိုင်းစစ်ဆေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်အကူအညီနှင့်မဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
BLS ကျွမ်းကျင်မှု - ကျောင်းသား ၅ ဦး မှ ၁၀ ယောက်အထိ / ၄၀ ယောက်၊ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် ၁၀ ယောက်က ၂၀ ဒေါ်လာ - ၃၅ ယောက်၊ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ယောက် ၃၀ ယောက်က ၃၀ ယောက်။
BLS အပြည့်သင်တန်း : ကျောင်းသား ၅ ဦး မှ ၁၀ တန်းအထိ၊ တစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၇၀၊ ကျောင်းသား ၁၀ ဦး မှ ၂၀ ဦး အထိ ၆၅ ယောက်၊ ကျောင်းသား ၂၀-၃၀ ဒေါ်လာ ၆၀ ယောက်။
First Aid with Heartsaver အပြည့်သင်တန်း - ကျောင်းသား ၅ ဦး မှ ၁၀ ယောက်အထိဒေါ်လာ ၈၀၊ ကျောင်းသား ၁၀ ဦး မှ ၂၀ ယောက်အထိဒေါ်လာ ၇၀ ယောက်၊ ကျောင်းသား ၂၀-၃၀ ဒေါ်လာ ၆၀ ယောက်။
ရှေး ဦး သူနာပြုကျွမ်းကျင်မှုများဖြင့်နှလုံးခွဲဝေမှု - ကျောင်းသား ၅ ဦး မှ ၁၀ ဦး အထိ / ၅၀ ယောက်၊ ကျောင်းသား ၁၀-၂၀ ဒေါ်လာ ၄၀ / လူတစ်ယောက်၊ ၂၀-၃၀ ဒေါ်လာ ၃၀ / လူတစ်ယောက်။
ACLS သင်တန်းကျွမ်းကျင်မှု - ကျောင်းသား ၅ ဦး မှ ၁၀ ဒေါ်လာအထိ / ၁ ယောက်၊ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ယောက် ၁၀-၂၀ ဒေါ်လာ ၉၀ ယောက်၊ ကျောင်းသား ၂၀-၃၀ ဒေါ်လာ ၈၀ ဦး ။
ACLS သင်တန်းအပြည့် - ကျောင်းသား ၅ ဦး မှ ၁၀ ဒေါ်လာအထိ / ၂၃၅ ယောက်၊ ကျောင်းသား ၁၀ ယောက်မှ ၂၀ အထိဒေါ်လာ ၂၁၀၊ ကျောင်းသား ၂၀-၃၀ ဒေါ်လာ ၁၈၅ ယောက်။
** BLS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သည် ACLS အားလုံးနှင့်အတူပါ ၀ င်ပြီး ၆ လအတွင်း ထပ်မံ၍ မရပါ။